Afaka mahita fomba iray hanatsarana ny sokajy fototra ho an'ny tranonkala ve aho?
Ny ampahany manan-danja indrindra amin'ny fampiroboroboana fanentanana fikarohana ataonao dia ny mitady ny teny filamatra ho an'ny tranokalanao. Ny laharam-pizakàn'ny sokajy dia raha ny habaka navoakan'ny tranonkalanao ao amin'ny Google ho an'ny sehatry ny fikarohana amin'ny sehatry ny tsenanao. Misy fiantraikany lehibe eo amin'ny fifamoivoizanao sy ny fiovam-po manaraka. Raha ny statistika dia maneho mihoatra ny 70% amin'ireo mpampiasa motera fikarohana ny tranokala izay napetraka ao amin'ny pejy SERP voalohany. Midika izany fa ny ambony kokoa no raisinao, ny tsara kokoa noho ianao. Ho an'ny fikarohana karama sy ara-organika, ny laharana fototra amin'ny teny fototra dia azo tanterahana amin'ny alalan'ny fampiasana fitaovana fikarohana teny sy karazan-tsindrim-peo fikarohana - small business camera shops.
Indrisy anefa, SEO tsy manome antsika foana ny valin'ny fanantenantsika. Ny fitaovam-pikarohana dia mety handrava ny pejinao ho an'ny teny fototra iray hafa mifanohitra amin'ny an'ireo izay tiantsika ny PageRank manokana. Andeha àry isika hiresaka momba izay azonao atao amin'io tranga io sy ny fomba ahafahanao manatsara ny laharan'ny pejy iray amin'ny teny fanalahidy tianao.
Inona avy ireo fomba tokony hanatsarako ny fanatsarana ny teny filamatra ho an'ny tranokalako?
Ny zavatra voalohany tokony hodinihinao dia ny karazana fampahalalan'ny Google avy amin'ny tranokalanao. Tokony ho azonao antoka fa ny Google dia mahazo famantarana fotsiny izay mety hitondra fifamoivoizana. Misy tsipika matevina eo amin'ny fanatsarana ny kalitao sy ny fanatsarana ny fanatsarana amin'ny fampiharana ny teknolojia fanadiovana mainty. Ny fanatsarana ny fanatsarana dia mety hitarika ny sazy Google ary hametra ny toerana misy ny laharam-pahamehana.
Noho izany, mba hanatsara ny pejy Internet anao amin'ny sora-baventy amin'ny sehatry ny sehatry ny tsenan'ny lozanao raha tsy misy fahadisoana mahery vaika, mila manaraka ireto dingana ireto ianao.
Teny fototra fototra
Mandritra ny dingana voalohany amin'ny fanatsarana ny lalao, jereo ny toerana misy ny pejy misy anao amin'izao fotoana izao noho ny fikarohana mila lasibatra. Ity tsipika ambany ity dia hanome anao fotoana handinihana ny fandrosoana fandrosoana amin'ny ho avy. Raha hanatsotra ity dingana ity ianao dia afaka mampiasa fitaovana matihanina matihanina toy ny Semalt Auto SEO na Google Keyword Planer. Noho ny fanampian'ireny fitaovana ireny, dia afaka manara-maso ny lanjanao isaky ny mandeha isan'andro ianao.
Mba hahitana ny fiovaovan'ny teninao, ampidiro ao amin'ny Google Maps Keyword Planner na ny Semalt Auto ny adiresy fohy sy tanjona SEO fitaovana. Ireo fitaovana roa ireo dia hanome anao ny fanovana mety amin'ny teny fanalahidy voafantina ary hanome anao ny fanadihadian'ny fifaninanana ho an'ny tsirairay amin'ireo teny fanalahidy ireo. Hanome anao hevitra mazava momba ny fifaninanana sy ny lanjanao ianao. Amin'ny dingana manaraka, ilainao ny mampiditra ny teny fanalahidy voatokana ao amin'ny boaty fikarohana Google mba hahazoana ny soso-kevitr'ireo sora-bolana manan-danja ao amin'ny Google. Ankoatra izany, mila manamarina ireo sehatra hita ao amin'ny pejy SERP voalohany sy soso-kevitra momba ny "teny mifandraika amin'ny teny mifandraika" ianao.
Mamaritra ny zavatra antenainao
Ity fikarohana voalohan'ny teny fototra ity dia hampiseho anao raha marina ny zavatra antenainao. Ohatra, raha tenifototra iray tianao hapetraka dia tsy tokony hovaliana ho toy ny tsy dia tsara loatra satria ho vitanao ny handresy ny mpifaninana eo amin'ny tsena misy anao miaraka amin'ny fitohanan'ny fifamoivoizana.
Hanamafy na hamerina ny fanantenanao, jereo ny valiny TOP10 ao amin'ny pejy SERP voalohany. Mila manamarina ianao na tsia ireo domains ireo ary mandra-pahafatiny.